mairie-antananarivo – FIVORIAN’NY MPANOLOTSAINA MONISIPALY
FIVORIAN’NY MPANOLOTSAINA MONISIPALY
auteur 2 janoary 2017
Nandroso sosonkevitra ny Filohan’ny Mpanolotsaina Monisipaly Andriambahoaka Faustin momba ny fiarahamiasan’ny Tananàn’Antananarivo Renivohitra sy ny Easy Park amin’ ny fitantanana ny Parking eto an-dRenivohitra androany zoma 29 Desambra2016 niarahana tamin’i Rasolondrainibe Maminiaina Tale Jeneralin’ny Easy Park sy ny Mpanolontsaina niampy ny Mpanatanteraka. Lohahevitra 3 no nisongadina nandritra ny fivoriana mba hisian’ny mangarahara :
-Fananganana Kaomisiona eo amin’ny EASY PARK sy ny Mpanolotsain’ ny Tanana ary ny Mpanatanteraka mba hisian’ny fitovian’ny tadin-dokanga amin’ny resaka Parking .
-Hajanona aloha ny fanitarana ny asa amin’ny volana Janoary 2017 fa aleo miara-midinika.
-Atao raikitra ny Fifanarahana eo amin’ny Kaominina sy ny EASY PARK fa tsy andrana toy ny teo aloha intsony , izay vao afaka manitatra ny asa ny EASY PARK. Ankoatra izay dia mangataka ny hampiakarana ny isan-jato ho an’ny kaominina ireo Mpanolontsaina sady nanentana ny EASY PARK mba hanatsara ny asany hanomezana fahafahampo ho an’ny mpanjifa .
AO ANATY » Fiaraha-miasa amin'ny tsy miankina, Mpiara-miombon'antoka
Hetsika fankalazana ny fetim-pirenena nataon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra
Tatitra fivoriana Pretoria Afrika Atsimo
juin 16 – juin 30 all-day
Ny 1 hatramin’ny 16 jiona 2017 no daty fisoratana anarana eny anivon’ny Boriboritany ka toy izao ny tsara ho fantatra amin’ny fifanitsanana : - Boriboritany faha 4 : Zoma 16 jiona 2017 ao amin’ny”College Hanitra[...]
Vaovao farany	Hetsika fankalazana ny fetim-pirenena nataon’ny Kaominina Antananarivo renivohitra
Fizarana fanomezana ho an’ ireo mpianatra teny amin’ ny Boriboritany fahatelo
Hankalaza ny Fetin’ny Fahaleovantena ny Kaominina Antananarivo Renivohitra